न्यूयोर्कमा डा. रुइतले 'मोटिभेसनल स्पीच' दिने - अन्य - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — आँखा रोग विशेषज्ञ डा.सन्दुक रुइतले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई 'मोटिभेसनल स्पीच' दिने भएका छन् ।
फेव्रुअरी १५ मा हुने कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थी र त्यहाँ कार्यरत नेपाली युवाहरुलाई लक्षित गरिएको आयोजक भ्वाइस फर युथले जनाएको छ । कार्यकम व्यक्तित्व विकास र करियर निर्माणका लागि सहयोगी हुने पनि आयोजकले बताएको छ ।
यो कार्यक्रमबाट उठ्ने सबै रकम डा. रुइतको परोपकारी संस्था 'हिमालयन क्याटर्‍‍‍याक्ट प्रोजक्ट' लाई उपलब्ध गराइने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : माघ १९, २०७६ १९:२१
जोकोभिचले जिते अस्ट्रेलियन ओपन
मेलबर्न — नोभाक जोकोभिचले आइतबार कीर्तिमान आठौं पटक अस्ट्रेलियन ओपन जितेका छन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियन जोकोभचले यसका लागि फाइनलमा डोमिनिक थिमलाई पाँच सेट चलेको कडा प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा हराए ।
सर्बियाली खेलाडी फाइनलमा ६–४, ४–६, २–६, ६–३ र ६–४ ले विजयी रहे । उनले २–१ सेटले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर १७ औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितेका हुन् ।
उदयमान खेलाडी मानिएका थिमका लागि ग्रान्ड स्लाम फाइनलमा फेरि एकपल्ट निराशा सामना गर्नु परेको छ । अस्ट्रियाका थिम यसअघि दुई पटक फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा पराजित भइसकेका छन् ।
प्रकाशित : माघ १९, २०७६ १८:५६